Madaxweynaha Puntland oo loo kordhiyay mudada uu ku magacaabayo Wasiiradda
GAROWE, Puntland - Madaxwaynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni, oo maanta hortegay Gollaha Wakiilada ayaa ka dalbaday inuu 14 cisho ugu kordhiyaan mudada magacaabista xukuumada cusub ee laga sugayo.
Fadhiga oo ay soo xaadirtay 66-da mudane ayaa waxaa shir gudoonka uu ahaa Afhayeenka Aqalka Cabdixakiin Maxamed Axmed [Dhoobo Daareed], xili ay ku wehliyeen labadiisa ku xigeen.
Mr Deni oo khudbad ka jeediyay madasha ayaa balanqaaday in xukuumada uu soo dhisi doono ay noqon doonto mid tayo leh, islamarkaana ka shaqayn doonta danaha reer Puntland iyo tan Soomaaliyeed.
Intaas kadib, sharcidejiyaasha oo cod uqaaday codsiga Madaxwaynaha ayaa natiijada kasoo baxday waxay noqotay inay taageertay 45 Xildhibaan, iyadda oo uu ka codeeyay hal mudane, waxaana ka aamustay 4 kale.
Sidaasi owgeed, gudoonka Gollaha ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dalabka Madaxwaynaha uu yahay mid ay cod aqlabiyad leh ku meel-mariyeen Xildhibaanada Wakiilada shacabka.
Dastuurka Puntland ayaa wuxuu qabaa in iyadda oo laga soo bilaabayo maalinta doorashada uu Madaxwaynuhu haysto 21-cisho si uu usoo dhiso xukuumad cusub, balse, waxaa muuqata inay ku filnaan wayday.
Sikastaba ha ahaatee, XIldhibaano ka tirsan Gollaha Wakiilada oo dhowr jeer ka hadlay magacaabista Gollaha Wasiirada cusub ayaa ku cel-celiyay inay ku rajo wayn yihiin inay noqoto mid tirro yar, islamarkaana tayo badan leh.
Musharaxiinta Puntland oo khudbado u jeedinaya Gollaha Wakiilada
Puntland 07.01.2019. 09:34
Mas'uuliyiin sare oo ka socotay dowladda Somalia ayaa loo diiday inay tagaan Garowe.
Itoobiya oo duqeyn ku dishay 35 kamida Al-Shabaab iyo jawaab laga bixiyay
Soomaliya 30.01.2019. 11:25
Habraaca doorashada Madaxweynaha iyo ku-xigeenka Puntland oo lasoo saarey
Puntland 05.01.2019. 12:23
Puntland iyo Itoobiya oo iska kaashanaya amniga iyo ganacsiga
Puntland 27.06.2019. 02:50
Deni oo shaaciyay caqabadaha uu wajahay intii uu soo xulayey Wasiradda [DAAWO]
Puntland 16.02.2019. 17:33